သို့သော်ထိုစာအုပ်ရင့်ကျက်သည်. ဒါဟာရင့်ကျက်နျဖိုးထားတ. ဒါဟာအသက်အရွယ်လေးစားသော. ခရီးစဉ်အသက်တော်နှစ်ပေါင်းကိုကျော်လွန်ပညာရှိဖြစ်၏. သူမြင်တယ်…
ဤသည်ဧဝံဂေလိတရားနှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအပေါ် ERLC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှခရီးစဉ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါသည်. အောက်တွင်ကြောင်းသတင်းစကားကိုမှလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီညနေ, ငါအနှစ်တစ်ထောင်နှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြရတယ် ....
ခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်ထဲတွင်, တက်, သူသည်ဤမျိုးဆက်မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားဖို့ကြိုးစားခဲ့. သူအခန်းကြီးအချို့မှတဆင့်သွားလာနှင့်တစ်ဦးလြှို့ဝှကျထှကျသှားအထွတ်အထိပ်ပေးသည်အဖြစ် Watch ...
ငါတိုင်းလူငယ်တစ်ဦးဖတ်ရန်လိုအပ်သည်ထင်သော "ခရီးစဉ်ရဲ့ရေးထားလျက်ရှိ၏စာအုပ်. ယရှေုသညျနှငျ့ဤမျိုးဆက်သည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဆင့်လာ. ငါကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင် ...
ခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်, တက်, ယခုထွက်သည်! အောက်ကစာအုပ်ယောဟန် Piper ရဲ့စကားချီး Read. သင့်အနေဖြင့်စာအုပ်ယူမှုကို pre နဲ့ကျွန်မအကြောင်းကိုသဘောကျတယ်အဓိကအရာကပို Risebook.tv မှာတစျခုထှကျရှာတှေ့နိုငျ ...
ခရီးစဉ် Lee ကသွန်သင်ခြင်း
မီဒီယာကစားရန်သင်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဗားရှင်းသင့် browser ကို update သို့မဟုတ်သင့် update လုပ်ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် flash ကို plugin ကို.
Up ကို Get နှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ဂရိတ်အတ္ထုပ္ပတ္တိအတွက် Live